Wararka Maanta: Axad, Feb 10, 2013-Iskahorimaad Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo dagaalyahanada Al-shabaab ku Dhexmaray Duleedka Degmada Ceelwaaq
Col. Maxamed Axmed Maxamuud (Carab) oo ku sugan degamda Ceelwaaq ayaa sheeagy in ciidamada dowladda ay ka hortageen weerar ay xoogag ka tirsan Al-shabaab doonayeen inay kusoo qaadaan degmada Ceelwaaq.
“Dagaalka waxaa ku dhintay shan dagaalyahan oo Al-shabaab ka tirsan, hal askari oo ciidamada dowladda ka tirsanna wuu ku dhaawcmay,” ayuu yiri Col. Carab, isagoo sheegay in xoogaggii Al-shabaab ay ka furteen hub fudud.
Sarkaalku wuxuu hadalkiisa ku daray in xoogagga Al-shabaab ay warteen gaari TOYOTO ah, iyadoo aysan dagaalkan weli ka hadlin Al-shabaab, balse gobolka Gedo ayaa ah gobol ay dagaallada ugu badan ku dhexmaraan ciidamada dowladda iyo kuwa Al-shabaab.
“Xaaladdu way daggan tahay saakay, ciidamada dowladda ayaana ku sugan deegaankii lagu dagaalamay,” ayuu sarkaalku u sheegay warbaahinta, si dhab ahna looma oga khasaaraha ka dhashay dagaalka.
Gobolka Gedo ayaa waxaa tan iyo sannadkii 2010 ka dhacayay dagaallo u dhexeeya xoogagga Al-shabaab oo intiisa badna ka talin jirtay gobolkaas iyo ciidamada dowladda oo kaashanaya ciidamada Itoobiya iyo Kenya oo qayb ka ah AMISOM.